Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo kormeeray suuqa Xoolaha “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo kormeeray suuqa Xoolaha “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo kormeeray suuqa Xoolaha “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa ee Gobolka Benaadir Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay xaafadda Suuqa Xoolaha ee Degmada Heliwaa, halkaasi oo uu kula kulmay qaar ka mid ah dadka xaafadda iyo ganacsatada halkaasi ku ganacsata.
Guddoomiye Cabdixakiin ayaa ujeedka kormeerka uu ku tega Xaafada Suuqa xoolaha ay taha sidii uu ugu kuur geli lahaa xaaladda Nololeed, tan ami iyo midda Ganacsi ee kajirta Suuqa, isagoo arrimahaasi ka xogwareystay qaar kamid ah ganacsatadii uu suuqa kula kulma.
“Waxaa maanta Kormeer Shaqo ku tegay Xaafadda Suuqa Xoolaha ee Degmada Heliwaa si aan ugu kuurgalo xaaladda nololeed iyo mida ganacsi ee halkaasi ka jirto, waxaan aad ugu faraxsanahay in deegaankaasi uu ka jiro horumar ganacsi oo isasoo tarayo” ayuu yiri Guddoomiyaha Degmada Heliwaa.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale la kulmay qaar ka mid dadka deegaanka oo ku shaahiyaynayay Waddada hareeradeeda kuwaasi oo uu ka xogwareystay xaaladda ay ku suganyihiin.
Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa sheegay in ka maamul ahaan uu xoogga saarayo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta kala dhexeysa shacabka degmada, isagoo wax lagu farxo ku tilmaamay sida dadka deegaanka ay maraksta xogta ula wadaagaan Hey’adaha ammaanka, taasi oo suurta gelisay in si wada jir ah looga qeyb qaato xoojinta nabadgelyada.
Guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii markale ka codsaday shacabka inay ka shaqeeyaan Nabadda, maamulkuna uu ka shaqeyn doono sidii degmada ay u noqon lahayd kuwa ugu horumarsan caasimadda.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Soomaaliya oo Maanta kormeeray Wasaaradda Maaliyadda “Sawirro”
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Khartuum lagu soo dhaweeyey